ဒေါ်လာ ၅၀ ထက်နည်းသောဆေးခန်းဖွင့်နည်း။
ပြည်နယ်အများစုတွင်ဒေါ်လာ ၅၀ ထက်နည်းသောဆေးခန်းဖွင့်နည်း။
ပြည်နယ်အများစုတွင်ဆေးခြောက်ဖွင့်ရန်စျေးကြီးသောလိုင်စင်ကြေးများ၊ လုံခြုံရေးလိုအပ်ချက်များ၊ ယစ်မျိုးခွန်အခွန်များ၊ ကုန်ပစ္စည်းစာရင်းနှင့် ၀ န်ထမ်းများကြောင့်တံခါးဖွင့်ရန်ဒေါ်လာ ၁ သန်းကျော်ကုန်ကျသည်။ ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသောကော်ပိုရေးရှင်းများကြောင့်ဤစျေးကွက်သစ်မှထွက်ခွါသွားသောအမေနှင့်ပေါ့ပ်စတိုးတို့၏ပုံပြင်များစွာရှိသည်။ ကျင့်သုံးပါ! However thanks to the 2019 farm bill you can open up your own hemp Delta 8 THC dispensary right from your home for less than $50 dollars using the Red Emperor Collective Affiliate Program.
ကျွန်ုပ်တို့၏ရိုးရှင်းသော Dispensary စီးပွားရေးအစီအစဉ်
အဆင့် ၁ အွန်လိုင်းမှဆေးပေးအစီအစဉ်တစ်ခုတည်းသာ Startup ကုန်ကျစရိတ် ၄၉.၀၀ ဒေါ်လာ
၄၉.၀၀ ဒေါ်လာသာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ CBD နှင့် Delta 49.00 THC ထုတ်ကုန်များအကြောင်းသင်၏သူငယ်ချင်းများနှင့်နောက်လိုက်များအားပြောပြခြင်းဖြင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာနှင့်အင်တာနက်တွင်ငွေရှာခြင်းကိုစတင်နိုင်သည်။ သင် ၀ ယ်သည်။ စုစုပေါင်းရောင်းဈေး၏ရာခိုင်နှုန်း ကျွန်ုပ်တို့၏ Affiliate အစီအစဉ်တွင်ပါ ၀ င်ရန်အခြားသူငယ်ချင်းများ၊ မိသားစု ၀ င်များနှင့်နောက်လိုက်များကိုလည်းသင်စုဆောင်းနိုင်ပြီး၎င်းတို့ရောင်းချသည့်အရာတိုင်းတွင် ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းကော်မရှင်ရနိုင်သည်။
အဆင့် ၂ အိမ်အခြေပြုစီးပွားရေးဆေးထိုးအစီအစဉ်စတင်ကုန်ကျစရိတ် ၂၄၉.၀၀ ဒေါ်လာ
1 Delta 8 THC Disposable Cartridge ၁၅ 49.99
၁ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ ၈ THC Vape Caridge ၁၁ 39.99
1 Delta 8 THC အနီရောင်ဧကရာဇ် Gummies 49.99
၁၀၀၀ MG CBD Tincture ပုလင်း ၁ လုံးငါ့ကုန်ကျစရိတ် 49.99
၁ CBD ခွေးကုသနည်း 29.99
၁ CBD Anti-Aging Cream 59.99
1 CBD နာကျင်မှုသက်သာဆေး Gel Roll-On 39.99
1 CBD နာကျင်မှု Patch 24.99
စုစုပေါင်းတန်ဖိုး $ 344.92
ဤအစီအစဉ်သည်၎င်းတို့၏သူငယ်ချင်းများနှင့်မိသားစုဝင်များသို့တိုက်ရိုက်ရောင်း။ ပိုငွေရှာလိုသူများအတွက်ဖြစ်သည်။ ဆေးခြောက်ကြိုက်သူနှင့် CBD ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုနားလည်သောလူမည်မျှသင်သိသနည်း။
သင်တို့သည်ရောင်းချခြင်းတစ်ခုစီ၌ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းကော်မရှင်အစား ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိတိုက်ရိုက်ရောင်းချခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လက္ကားစျေးနှုန်းစာရင်းကိုလည်းသင်ရယူနိုင်လိမ့်မည်။ မည်သည့်အင်တာနက်ရောင်းအား၏ထိပ်တွင်မဆိုသင်ကိုယ်တိုင်သို့မဟုတ်သင်၏လုပ်ငန်းခွဲများမှပြုလုပ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Dispensary Affiliate အစီအစဉ်ကို သုံး၍ သင်ငွေမည်မျှရနိုင်သနည်း။
တွဲဖက်အရေအတွက် လစဉ်ရောင်းအား စုစုပေါင်းရောင်းအား တစ်လလျှင် Commision အမြတ်
10 $ 1,000.00 $ 10,000.00 ၅၀၀.၀၀ ကျပ်
ထိုအရာများသည်မြင့်မြတ်သောပန်းတိုင်များဟုထင်ရသော်လည်းအလယ်အလတ်အရွယ်အစားရှိသောမြို့တစ်မြို့တွင်ပျမ်းမျှအပန်းဖြေဆေးခြောက်ဆေးခန်းကိုတစ်လလျှင်ပျမ်းမျှ ၁ သန်းရောင်းသည်ကိုသတိရပါ။ ကြည့်ပါ https://www.502data.com/
အဆင့် ၃ သင်၏ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ် Website နှင့် Physical Hemp Store
ဖက်ဒရယ်ဆေးခြောက်ဥပဒေကအနီးဆုံးမှာရှိနေတယ်၊ ​​အခုမင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်ကိုစတင်ပြီး t ကို ၀ င်ရောက်နိုင်ဖို့နှစ် ၁၀၀ အခွင့်အလမ်းကမင်းရဲ့စိတ် ၀ င်စားစရာအသစ်တစ်ခုပါ။ ကနေဒါသည်အပြည့်အဝတရားဝင်ခွင့်ပြုခြင်းနှင့်မက္ကဆီကိုသည်ဖက်ဒရယ်အဆင့်တွင်ဆေးခြောက်ကိုတရားဝင်ခွင့်ပြုခြင်းသည်အမေရိကန်ကအလားတူလုပ်ဆောင်ခြင်းမပြုမီအချိန်သာဖြစ်သည်။ ကြားတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Delta 1 THC & CBD နှင့်ချိုမြိန်သောနေရာတွင်ရှိသည်။ များစွာသောပြည်နယ်များသည်တက္ကဆက်၊ ဖလော်ရီဒါ၊ မြောက်ကာရိုလိုင်းနား၊ အလာဘားမားကဲ့သို့အပန်းဖြေဆေးခြောက်ကိုတရားဝင်ခွင့်မပြုသောကြောင့်ပုံမှန်ဆေးခြောက်ကိုတရားဝင် ၀ ယ်ယူခွင့်မရှိ၊ ထောင်ဒဏ်၊ ငွေဒဏ်နှင့်၎င်းတို့၏ကလေးများဆုံးရှုံးနိုင်သည်။ Delta 100 THC နှင့်မဆိုင်ပါ၊ သူတို့သည်တားမြစ်မှုကိုမထားခဲ့လျှင်၎င်းသည်အပိုင်ရောင်းရန် ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းတရားဝင်နေပြီး CBD ၀.၃ ရာခိုင်နှုန်း Delta 8 THC အောက်ရှိနေသရွေ့ CBD ကိုသာကြိုက်နှစ်သက်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည် Texas ၌ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလျှော်စတိုးဆိုင်ဖွင့ ်၍ တရားဝင် CBD THC 8 & 100 ထုတ်ကုန်များကိုယနေ့စတင်ရောင်းချနိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ ထောင်ပေါင်းများစွာသောစွန့် ဦး တီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များသည်ယခုအချိန်တွင်နိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံး၌တူညီသောအရာကိုလုပ်ဆောင်နေကြသည်။ ကြည့်ပါ။ https://journalstar.com/news/local/crime-and-courts/theyre-not-doing-anything-illegal-lincoln-police-not-concerned-with-delta-8/article_3086ad5e-dc10-59cd-88cc-0f72cc67018b.html
CBD နှင့် Delta 8 ဆေးပေးခန်းများသည်နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိသည်။ သင်၏ယခုစတင်ပါ။
မင်းမှာကိုယ်ပိုင်စတိုးဆိုင်ရှိရင်မင်းပိုအမြတ်အစွန်းပိုရစေမယ့်ငါတို့ရဲ့ပမာဏအများကြီးလျှော့စျေးတွေကိုသုံးခွင့်ရလိမ့်မယ်၊ ဒီအစီအစဉ်နဲ့အတူမင်း CBD ထုတ်ကုန်တွေကိုမင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်တံဆိပ်နဲ့မင်းလူတွေကိုရောင်းနိုင်တယ်၊ မင်းထုတ်ကုန်တွေကိုရောင်းနိုင်တယ်။ နိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးမှာ ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ကားစာမျက်နှာမှသင်လိုအပ်သလောက်ထုတ်ကုန်များစွာကို ၀ ယ်ယူရုံဖြင့်ဤအစီအစဉ်အတွက်အပိုကုန်ကျစရိတ်မရှိပါ။
အဆင့် ၅ သင်၏ကိုယ်ပိုင် Brand Website နှင့် Physical Store
တစ်ကြိမ်တည်းတပ်ဆင်ခ + ၂၂၀ ဒေါ်လာ
ငါတို့သည်သင်တို့၏စာရင်း ၀ င်ကိုထောက်ပံ့သည်
ချက်ချင်း CBD စတိုး
တိုက်ရိုက်စကားပြော Widget လေး
ကျွန်ုပ်သည်ရောင်း ၀ ယ်မှုမည်မျှရနိုင်သနည်း။
ရောင်းချမှုတိုင်းတွင်သင်၏အမြတ်ဝေစုကိုသင်ရရှိလိမ့်မည်။ CBD ၀ ယ်သူအများစုသည်ပျမ်းမျှအားဖြင့်ဒေါ်လာ ၁၂၀ ကျော်၊ မင်းကိုဒေါ်လာ ၆၀ ကနေ ၇၀ ကြားကော်မရှင်ပေးတယ်။ သို့သော်လည်းသင်၏စျေးနှုန်းများ သတ်မှတ်၍ သင်၏ကုန်ဈေးနှုန်းနှင့်သင်၏ရောင်းဈေးကြားခြားနားချက်ကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။
ဒါက MLM ပရိုဂရမ်လား။
မဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် dropship အစီအစဉ်တွင်မပါ ၀ င်ပါ။ ကော်မရှင်အားလုံးသည်သင်၏ဖောက်သည်များထံမှအမှန်တကယ်ရောင်းအားပေါ်မူတည်သည်။
မဟုတ်ပါ၊ စာသားအရာမှန်သမျှစီးပွားရေးနှင့်ပတ်သက်သောဖြည့်ဆည်းမှုသည်ကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်သည်။ မင်းရဲ့တစ်ခုတည်းသောအာရုံကဖောက်သည်တွေကိုမင်းရဲ့အွန်လိုင်းစတိုးဆီကိုမောင်းပို့ဖို့ပဲ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ပို့ဆောင်ခြင်း၊ အခွန်နှင့်ငွေပေးချေမှုတို့ကိုကိုင်တွယ်သည်။ မင်းအတွက်လွယ်လွယ်ကူကူမရဘူး။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ၁ ရက်အတွင်း Affiliate လျှောက်လွှာအသစ်တိုင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ပြန်လည်သုံးသပ်သည်။ လျှောက်လွှာပုံစံတွင်သင်အသုံးပြုလိုသောမည်သည့် website (သို့) စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းလမ်းများကိုထည့်သွင်းရန်သေချာပါစေ။ သင်၏ Affiliate လျှောက်လွှာကိုစီမံပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အား Welcome Email နှင့်ညွှန်ကြားချက်များပို့ပေးပါလိမ့်မည်။
ငွေလွှဲခြင်းကိုဘဏ်ငွေလွှဲမှတဆင့်ဖြစ်စေ၊ သင်၏ရန်ပုံငွေရုံးမှသင်၏ရန်ပုံငွေရုံးသို့အမေရိကန်ရန်ပုံငွေဖြင့်စစ်ဆေးလိမ့်မည်။ ၁ ရက်မှ ၁၅ ရက်အထိပြုလုပ်သောအရောင်းများကို ၁၆ ရက်နေ့တွင်ပေးချေလိမ့်မည်။ ၁၆ ရက်မှ ၃၁ ရက်အထိရောင်းအားကိုပထမရက်တွင်ပေးလိမ့်မည်။
မဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အစီအစဉ်များသည်တွဲဖက်အစီအစဉ်တစ်ခုနှင့်မတူပါ။ သင်၏ကိုယ်ပိုင် ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုစျေးကွက်သို့လက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပလက်ဖောင်းတွင်သင်၏ကိုယ်ပိုင်တံဆိပ်ဖြူထုတ်ကုန်များပါ ၀ င်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုသင်၏ကိုယ်ပိုင် CBD ထုတ်ကုန်များဖြင့်စျေးကွက်တင်ရောင်းချလိမ့်မည်။
သင်၏စီမံခန့်ခွဲမှုဒိုင်ခွက်မှတဆင့်အရောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အချိန်နှင့်တပြေးညီစာရင်းဇယားများကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးသည်။ သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်၌ရိုးရှင်းစွာ ၀ င ်၍ သင်၏ dashboard ရှိအရောင်းနှင့်စာရင်းအင်းအချက်အလက်များကိုစစ်ဆေးကြည့်ပြီးအမှာစာ၊ ၀ ယ်သူ၊ ရရှိသောကော်မရှင်နှင့်အခြားအရာများအားလုံးကိုသင်မြင်နိုင်လိမ့်မည်။
မည်သည့်အမျိုးအစားကိုမဆိုအီးမေးလ်ပို့ခြင်းအားအီးမေးလ်များကိုမတောင်းသောသူများအား SPAM ဟုခေါ်သည်။ အီးမေးလ် (သို့) newsgroup spamming အမျိုးအစားကိုကျွန်ုပ်တို့ခွင့်မပြုပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အီးမေးလ်အမြောက်အမြားကိုစပမ်းလုပ်ခြင်း၏အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွင်မပါ ၀ င်သောစာပို့စာရင်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းသည်။ အီးမေးလ်သို့မဟုတ်သတင်းအုပ်စုစာရင်းထဲမပါ ၀ င်သောကြော်ငြာများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေသည့်မည်သည့်အကောင့်တွဲများရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိလျှင်ငါတို့အကောင့်ကိုပိတ်ပြီးဆိုင်းငံ့ထားသောကော်မရှင် ၀ င်ငွေအားလုံးကိုပယ်ဖျက်လိမ့်မည်။ အီးမေးလ်များနှင့်သတင်းအုပ်စုအုပ်စုစပမ်းများ မှလွဲ၍ သူတို့သုံးလိုသောအွန်လိုင်းကြော်ငြာပုံစံမျိုးကိုသုံးရန်ကျွန်ုပ်တို့ထောက်ခံသည်။